Isteersada gawaarida oo sagaal jeer ka bacteria badan musqulaha (Daraasad) – SBC
Isteersada gawaarida oo sagaal jeer ka bacteria badan musqulaha (Daraasad)
Posted by editor on April 23, 2011 Comments
Way dhici kartaa in baabuurkaagu uu yahay nooca ugu dambeeya ee lagu socdo, ama in aad si wanaagsan goobaha gawaarida lagu dhaqo ku soo dhaqdey amaba aad si habsami lah u carfiso laakiin waxaa dhici karta in isteersada gaariga aad ka wado ay ka jeermis badan tahay 9 jeer musqulaha dadku isticmaalan.
Daraasad cusub oo soo baxdey ayaa lagu ogaadey in 80 nooc oo ka mid ah jeermiska uu xambaarsan yahay isteerinka baabuurta uu ka badan yahay kan saaran fadhiga musqulaha ee saxarada.
Dr Ron Cutler oo ka tirsan jaamacada Queen Mary University ee magaalada London oo ka mid ahaa kooxdii daraasadan soo saartey ayaa sheegay in dad badan oo darawalo ah aanay inta badan nadiifin isteerinka gawaaridooda taasi oo keenta in jeermiska gacmaha uu ku haro isteersada gawaarida.
“Dad badan ayay dhacdaa inay nadiifiyaan guryahooda laakiin aanay si joogto ah u nadiifin gawaaridooda taasi oo keenta in gudaha baabuurta gaar ahaan isteersadu ay noqoto mid jeermis badan” ayuu yiri Dr Ron Cutler . Jeermiskaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho faraha ama gacmaha aan nadiifka ahaan oo darawalka ama shufeerku uu ku qabto garaangirsa ama isteersada fatuurada taasi oo ku reebta wasaq ama jeersmis.
Waxyaabaha kale ee jeermiska ku dhaliya gaariga ayaa ah iyadoo dad badan ay cunto ku dhex cunaan gawaarida iyagoo ka dibna aan nadiifin ama uga taga wax uun haraa qashin ah taasi oo ay ka dhalato jeermis.
Hey Haji, waaw that’s nice article good see realy, maba ogeen in dhibtaasi ay jirto hada ka dib I have to clean inside of my car.loooooooooool